AMISOM oo eedeyn kulul u jeedisay Idaacad ku taalla magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
AMISOM oo eedeyn kulul u jeedisay Idaacad ku taalla magaalada Muqdisho
Afhayeenka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM Col. Wilson Rono ayaa si kulul u cambaareeyay Idaacadda Shabelle oo ka mid ah Idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho.
Col. Wilson Rono ayaa Idaacadda Shabeelle ku eedeeyay inay war been ah ka faafisay AMISOM, wuxuuna war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in kolonyo ciidan oo ay lahaayeen qarax miino lagula eegtay agagaarka deegaanka Arbacow oo qiyaastii 20km dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ayaa sheegay in qaraxaas uu ka dhashay dhaawac iyo burbur xoog leh soo gaaray mid ka mid ah gaadiidkooda iyo askari ka tirsan ciidankooda oo dhaawac fudud kasoo gaaray qaraxa, waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay qof haweeney ah oo ka ag dhaweyd goobta uu qaraxa ka dhacay.
Sidoo kale, afhayeenka ayaa sheegay in haweeneyda dhaawaca soo gaaray ay laheyd uur, islamarkaana ay si degdeg ah ugu gurmadeen una qaadeen isbitaalka AMISOM, iyadoo markii dambena la geeyay isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho oo xaaladeeda ay haatan degan tahay.
Ugu dambeyn, afhayeenka AMISOM Col. Wilson Rono ayaa ku tilmaamay warka laga sii daayay Idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho mid been abuur ah oo sumcada looga dilayo ciidamada AMISOM.